सिन्धु विद्यालय स्थापनाका साक्षी अंग्रेजी शिक्षाका पक्षधर पोषप्रसाद नेपालको निधन | Aaja ko Shiksha
सिन्धुपाल्चोकका पुराना शैक्षिक अभियन्ता एवं शिक्षक पोषप्रसाद नेपालको शनिबार राती ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
लामो समयदेखि विरामी पर्नुभएका नेपालको बुढानिलकण्ठ रुद्रेश्वरस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो । सिन्धुपाल्चोकको सिन्धुकोट गाउँ (हाल मेलम्ची नगरपालिका–५) मा वि.सं. १९८३ सालमा जन्मिनुभएका नेपालले पारिवारिक वातावरणमै कखरा सिक्नुभएको थियो । पछि कक्षा ८ सम्म रानीपोखरीस्थित संस्कृत विद्यालयमा पढ्नुभयो ।
वि.सं. २०१६ सालबाट शिक्षण पेशा शुरु गर्नुभएका नेपालले करिव १६ वर्ष पढाएर छोड्नुभएको थियो । सिन्धुपाल्चोकको भोटेचौरस्थित जैसीगाउँको जाल्पादेवी प्राविबाट शिक्षण थाल्नुभएका नेपालले काठमाडौंको बाँसबारीमा रहेको एउटा विद्यालयमा एक वर्ष पढाउनुभयो । फेरि सिन्धुपाल्चोकमा फर्किएर थकनी हुँदै सिन्धुकोटको विद्यालयमा पुग्नुभयो । उहाँ २०३१ देखि २०३२ साल पुससम्म तत्कालीन सिन्धुपुरानागाउँ प्राथमिक पाठशालामा प्रधानाध्यापक हुनुभयो ।
वि.संं. २००६ सालमा सिन्धु पाठशाला (हाल सिन्धुपुरानागाउँ मावि) स्थापना गर्ने अभियन्तामध्ये नेपाल पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो । ’श्री ३ पद्म शमशेर महाराजाले लालमोहर लगाएपछि सिन्धु पाठशालाले स्थापनाको अनुमति पायो...’ २०६७ सालमा विद्यालयको वृत्तचित्र निर्माणका क्रममा गरिएको कुराकानीमा नेपालले जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले बोल्नुभएको सोही भिडियो क्लिप्स सिन्धुपुराना गाउँ माविलाई ‘सात सालभन्दा अघिको विद्यालय’ सूचीमा देखाउने आधिकारिक प्रमाणहरुमध्ये एउटा बलियो तथ्य बन्यो । विद्यालयले सोही आधारमा सरकारसित सात सालभन्दा अघिका विद्यालयले पाउने आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको थियो ।
राणाकालताका शिक्षित हुनु र दुनियाँका निम्ति विद्यालय स्थापना गराउनका लागि अगुवा बन्नु चानचुने ठानिँदैनथ्यो । शिक्षामा सिन्धुपाल्चोकका दुई ठाउँ निकै चर्चित थिए भनिन्छ । एउटा, सिन्धु (सिन्धुकोट) र अर्काे बसन्तपुर/तीनघरे भेक । त्यसै भएर सिन्धुकोटका अगुवाहरूले राणाकालमै पाठशाला स्वीकृत गराएर ल्याउन सकेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
स्व. नेपाललाई सिन्धुमा अंग्रेजी शिक्षा पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका पक्षधर मानिन्थ्यो । सिन्धु भेकमा ‘अंग्रेजी शिक्षा पढाउनु हुँदैन’ भन्ने मान्यता प्रबल थियो । तर, त्यसविरुद्ध उभिँदै नेपालले अंग्रेजी शिक्षा पढाउन भोटेचौर निवासी सिद्धिबहादुर श्रेष्ठलाई जैसीगाउँको स्कूलबाट सिन्धुकोट लैजानुभएको बताइन्छ ।
स्थानीयका अनुसार २०३० को दशकमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना शुल्क एक मोहर अर्थात् ५० पैसा लाग्थ्यो । गाउँमा लाठेले दिनभरी खन्दा पनि त्यत्ति पैसा हात लाग्न गाह्रो पर्थ्यो । ‘त्यस्तो अवस्थामा बाले शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गरिदिनुभएको थियो,’ छोरा बलराम नेपालले भन्नुभयो । शिक्षा अभियानमा त्यसबेला उहाँका समकालीन रोहिणीराज सिग्देल र उपेन्द्र सिग्देलले साथ दिनुभएको थियो ।
नेपालले सिन्धुकोटमा ‘आफ्नो आधुनिक पुस्तकालय’ स्थापना गर्न पनि भूमिका खेल्नुभएको छोरा बलराम बताउनुहुन्छ । उसबेला नापी आउँदा सिन्धु विद्यालयका नाममा सार्वजनिक जग्गालाई नापी गराउन बुवाको सक्रियता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षण पेशा छोडेपछि तत्कालीन सिन्धुकोट गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च दीपबहादुर रायामाझीको सचिवका रुपमा नेपालले काम गर्नुभयो । पछि राजनीतिप्रति पनि नेपाललाई चाख बढ्दै गयो र प्रधानपञ्चकैविरुद्ध २०३९ मा उहाँ चुनाव उठ्नुभएको थियो तर हार्नुभयो ।
गीताको सारसम्बन्धी पुस्तकसमेत लेख्नुभएका स्व. नेपाल धार्मिक स्वभावका, सरल, मृदुभाषी तथा सिन्धु शिक्षाका एक साक्षी हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौंको शंखपार्कमा शिव मन्दिरको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न उहाँले योगदान दिनुभएको थियो । सिन्धुकोटका नेपाल वंशसम्बन्धी किताबका साथै वेद स्तुतिसमेत लेख्नुभएको छ ।
उहाँको निधनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरुमा पुराना तथा नयाँ पुस्ताहरुले गहिरो दुःख मनाऊ गर्दै स्मरण गरेका छन् । पुराना शिक्षक बद्रि आचार्यले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा लेख्नुभएको छ, ‘२०३१ साल भाद्रदेखि २०३२ साल पुससम्म तत्कालीन सिन्धुपुरानागाउँ प्राथमिक पाठशालामा उहाँसँग काम गर्ने मौका मिलेको थियो । उहाँ अत्यन्तै सरल, सहयोगी एवं मृदुभाषी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको स्वर्गारोहणको खबरले मर्माहत भएको छु ।’
स्वर्गीय नेपालका पाँच छोरा र ३ छोरी हुनुहुन्छ ।